सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफीमा नेसनल अवार्ड जित्ने १४ गजबका फोटोहरु - Bijay Dimdong
Personal Photography World
This image was taken with my iPhone X close to my home at Wallabi Point, New South Wales, Australia, after devastating bushfires swept through the area. As I watched the sun set through the smokeakookaburra appeared and allowed me to walk right up to it. We sharedamoment, watching the sun fade behind the apocalyptic scene… he was laughing.
कतिपयलाई लाग्छ महँगा क्यामेरा र लेन्सले मात्र राम्रा फोटो खिच्छ। त्यस्तै फोटोले मात्र अवार्ड जित्छ। तर होइन, यो फोटो आइफोन एक्सले खिचेको हो। अस्ट्रेलियाको तर्फबाट एडम स्टिभेन्सनले नेसनल अवार्ड जिते।
यो अलि क्रियटिभ किसिमको फोटो हो। अचेल युट्युबमा भिडियो हेर्ने पुस्तालाई थाहा नहोला, तर यो भिसिआरको टेप हो। यो टेप डेकमा राखेर टेलिभिजनमा फिल्म हेर्ने गर्थे पुरानो पुस्ता। बंगलादेशको तर्फबाट नेसनल अवार्ड जित्ने टोन्मोय अधिकारीले ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा खिचेको यो फोटोमा आँखा चाहिँ ह्वाइट छ, क्यासेट चाहिँ ब्ल्याक।
Photographer Name: Tonmoy Adhikarye’
पहिलो विश्वयुद्धका क्रममा खनिएका सुरुङ र ग्यालरीहरु देखिने गरी सूर्यास्तका बेला खिचिएको यो फोटोले बुल्गेरियाको तर्फबाट नेसनल अवार्ड जित्यो।
ब्राजिलको तर्फबाट नेसनल अवार्ड जितेको यो फोटोले ब्राजिलमा बेचबिखन गरी ल्याइएका र दास बनाइएका दुई अश्वेतहरुको मिलनलाई देखाउँछ।
म्यान्मारका तर्फबाट नेसनल अवार्ड जितेको यो फोटो खिचिएको भने मंगोलियामा हो। चीलसँग शिकार खेल्न जाने यिनीहरु सामान्यतया मंगोलिया र कजाखस्तानको सीमामा बस्छन्। हरेक अक्टोबर महिनामा हुने महोत्सवमा कजाख चिल शिकारीहरुको भेला हुन्छन्। कजाख सरकारले यिनीहरुलाई आफ्नै देशमा फर्काउन फकाए पनि अधिकांश भने मंगोलियामा नै बस्छन्।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राइनो हैन गैँडा भन्नुपर्छ, एक सिङ्गे गैँडा हेर्न नेपालै आउनु पर्छ अन्यत्र पाइन्न भने पनि यो फोटो भने भारतको आसामस्थित पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ स्यान्क्चुरीमा खिचिएको हो। दुई भालेपोथी एक सिङ्गे गैँडाको प्रजनन क्रियाको यो फोटोमा एउटा बकुल्लो पनि देखिन्छ। भारतको तर्फबाट नेसनल अवार्ड जितेको हो यो फोटोले।
समुद्र छेउमा पौडी खेलिरहेका यी मानिसहरु कमिला जस्ता देखिन्छन्। इटालीका तर्फबाट नेसनल अवार्ड जित्न सफल भएको हो यो फोटोले।
सूर्यास्त हुँदै गर्दा घोडाहरु धपाउँदै घर फर्किरहेको यो फोटोले मलेसियाको नेसनल अवार्ड जित्यो।
रोमानियाको नागबेली बाटोको यो फोटोले लात्भियाको तर्फबाट नेसनल अवार्ड जित्यो।
यिनको नाम माजा हो। नर्तकी तथा गायिका। सर्बियन परम्परा अनुसारको रङ अनुहारमा लगाएकी छिन् उनले। सर्बियाको तर्फबाट नेसनल अवार्ड जितेको हो यो फोटोले।
चिया बगानको यो फोटोले भियतनामको तर्फबाट अवार्ड जित्यो।
Photographer Name: Tran Tran
थाइल्यान्ड जापानको कावागुचिगो लेकको यो फोटोले थाइल्यान्डका तर्फबाट नेसनल अवार्ड जित्यो।
फोटोग्राफरले राजधानी सउलमा फेसन सुट गर्छन्। यो क्रममा मोडलहरुलाई उनले अङ्गालो हाल्न र केही शान्त कुरा सोच्न भनेका थिए।
विजय डिम्दोङ ४ चैत्र २०७६, मंगलवार १८:१८
by विजय डिम्दोङ ८ चैत्र २०७६, शनिबार १९:२६
moments of happiness😍😍
Dear Well-wishers of Lhotse, Thank you for your L